Maka nke a, agbajiri ihuenyo nke Galaxy Fold, dị ka iFixit | Gam akporosis
Ndi oru mgbasa ozi juru anya na nso nso site na akuko na ihe ngosi mgbanwe na ufodu ihe nyocha nke ohuru Fold Galaxy nke Samsung bu agbasa n'ụzọ dị mfe.
Ihe omume ndị a dugara Samsung na yigharia mwepụta nke Fold n'ụwa niile. Oge mmalite nke Galaxy Fold dara ụfọdụ na-eche ihe na-ezighi ezi na ngwaọrụ a na-akwụ ụgwọ dị ka ekwentị azụmaahịa mbụ nke ụwa, ọkachasị na-atụle ọnụahịa ihe dị ka $ 2,000 ọ na-ebu. Na mmekọrita, iFixit akọwaala ihe kpatara igwe gbajiri agbaji ...
Na blog ọhụrụ, Kevin Purdy na ndị ọzọ so n'òtù iFixit ahụ na-enyocha okwu ndị amaara ama na-egbu ndị nyocha nwere ohere iji Samsung Galaxy Fold. Ndị otu ahụ kwenyere ụfọdụ dabere na ihe karịrị afọ iri nke na-enyocha internals nke ngwaọrụ na-eji mgbanwe AMOLED ogwe aka yiri nke dị na ọdụ a. (Lee anya ⇒ Galaxy Fold vs Huawei Mate X: echiche abụọ dị iche maka otu nzube ahụ)
Broken Galaxy Fold screen
Na nkenke, akwụkwọ ozi ahụ gosipụtara nke ahụ OLED ihuenyo bụ isi nke nsogbu Galaxy Fold, karịsịa ebe ọ na-enweghị akwa nchekwa dịka Gorilla Glass n’elu. A na-ekwu na ngosipụta OLED dị oke nhịahụ, yabụ ọbụlagodi obere uzuzu nwere ike ibute nsogbu, na ogige ahụ nwere ọtụtụ ebe ntụ nwere ike ịbanye na mpaghara dị nro.
Ọ bụrụ na ị maghị: Ogwe AMOLED dabere na teknụzụ OLED. Ha nwere ọtụtụ elele karịa ụdị LCD ndị ọzọ: ha na-arụ ọrụ na-enweghị ọkụ ọkụ, dị ike na ịrụ ọrụ nke ọma, ma nwee ike ịmepụta agba chacha acha.
N'ọnọdụ ụfọdụ, a na-ewepụ ihe nkiri nchedo na OLED na-atụ anya na ọ dị ka ihe nkiri ahụ na-ewepu mmiri na-ewepu mmiri nke na-ebu ọtụtụ ekwentị. Nke ahụ mebiri ihuenyo OLED ma gosipụta nke ahụ nrụgide siri ike na ụdị ụdị a na-enweghị nchebe dị ize ndụ.
Tupu mmalite nke Galaxy Fold, Samsung amalitela ule nyocha nke nrụpụta nke ọma maka ngwaọrụ ahụ, ebe folda robot doro usoro mpịachi na folda dị iche iche. iFixit nwere uche na ule ndị ahụ dịkwa oke arụ ma ghara ịlele eziokwu ahụ bụ na ojiji mmadụ dị iche.
N'ikpeazụ, ndị otu iFixit kwukwara na enweghi akara akara raara onwe ya nye na etiti ihuenyo ahụ na-egbochi ya ịpịgharị ya mgbe niile, na-etinye nrụgide karịa na ngalaba OLED.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » N'ihi nke a, agbajiri ihuenyo nke Galaxy Fold, dị ka iFixit
A na-emepụta Huawei P30 Lite na Spain